Nsọpụrụ ụbọchị: omume nke ndụ dị n'ime
Paolo Tescione	Edere ya November 19, 2020 November 19, 2020
You maara ya? Ọbụghị naanị na ahụ nwere ndụ ya; Ọzọkwa obi, n’ebe Chineke nọ, nwere ndụ nke aka ya, nke a na-akpọ n’ime, nke ịdị nsọ, nke ịdị n’otu n’ime Chineke; ya na nkpuru obi na anwa ime ka onwe ya ba uba site na omume oma, uru ya, ihunanya nke eluigwe, ya na otu nlebara anya nke ndi uwa na acho akuba, onu na obi uto nke uwa. Ọ bụ ndụ nke ndị Senti, ndị mmụta ha niile mejupụtara na imezigharị ma chọọkwa mmadụ mma iji mee ka ọ dị n'otu na Chineke.. Ma ndụ a?
You na-eme ya? Ihe kachasị mkpa nke ndụ ime dị na mwepu nke ngwongwo nke ụwa na icheta ihe efu na nke obi, yana ọrụ nke steeti. Ọ bụ ngwa na-aga n'ihu iji gosi ịdị umeala n'obi, ịhapụ onwe anyị; ọ na-eme ihe niile, ọbụlagodi nke a kacha ahụkarị, maka ịhụ Chineke n’anya; ọ na-agụ agụụ mgbe niile .1 Chineke nwere Ejaculatory, ya na onyinye a na-achụrụ Chineke na ọdịdị nke uche dị nsọ Kedu ihe ị na-eme ihe a niile?
Udo nke ndu di n'ime. Baptizim e mere anyị ga-eme ka anyị bie ezigbo ndụ. Ihe nlere anya nke Jisos onye zoro ezo rue iri ato na onye doro ihe nile o mere n’ihu oha anya site n’ekpere, site n’inye onyinye nye Nna Ya, n’acho otuto Ya, bu oku ka anyi imitateomie ya. Ọzọkwa, ndụ ime na-eme ka anyị dị jụụ n'omume anyị, na-ahapụ ịchụ àjà, na-enye udo nke obi ọbụna na mkpagbu… you chọghị ịga n'ụzọ a?
OMUME. - Nọrọ n’ịdị n’otu nke gị na Chineke, na-eme omume, ọ bụghị n’otu oge, kama na-eji ezi omume na nsọpụrụ na ebube nye Ya.
Nke gara aga Post Gara aga post:Chee echiche taa na nnukwu ọnwụnwa anyị niile na-eche ihu na enweghị mmasị na Kraịst
Next Post → Post ozo:Ndị uwe ojii hụrụ € 600.000 ego n’ụlọ onye ọrụ Vatican a kwụsịtụrụ